Ergayga Midowga Yurub ee Soomaaliya oo shaaciyay in uu xiriir la sameeyey madaxda sare ee Midowga Maxaakiimta iyo Dowladda Federaalka..
Wararkii: July 19, 2007
Ra�isul Wasaare Geedi oo Mareykanka iyo Midowga Yurub ku eedeeyey in ay ka gaabiyeen taageerista shirka dib u heshiisiinta qaran
C/raxmaan Shifti oo wax kama jiraan ku tilmaamay in Guddiga Shirku uu iibsaday waraaqihii caasuumaadda
Mas�uuliyiinta ugu sareysa Dowladda oo kulan wada yeeshay
Suuqa Bakaaraha oo maalintii 15-aad uusan dhaqdhaqaaq ganacsi ka jirin
Degmooyiinka C/casiis, Shibis iyo Shangaani oo la soo dhoobay ciidamo dheeraad ah
Dhul gariir mudu 3 maalmood ah laga dareemayay xaafada Islii ee ay soomaalidu dagan tahay.
Ergayga gaarka ah ee Midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Mr. George Marc-Andre oo war siiyey Wargeyska Al-Sharqal-Awsat ayaa sheegay in uu xiriir la sameeyey Guddoomiyaha Golahii Maxaakiimta Islaamiga ah Sheekh Shariif Axmed iyo waliba Guddoomiyihii Golaha Shuurada Maxaakiimta Sheekh Xasan Daahir Aweys, waxa uuna ergaygu sheegay in ay ka wada hadleen xaaladda Soomaaliya iyo waliba shirka dib u heshiisiinta ee Muqdisho ka furmay, waxa uuna Mr. Andre sheegay in dhanka kale uu xiriir la sameeyey Madaxweynaha Dowladda Federaalka C/llaahi Yuusuf iyo Guddoomiyaha shirka qaran Cali Mahdi Max�ed. Andre ayaa tilmaamay inay wada hadalada u dhexeeya isaga oo ka socda Midowga Yurub iyo xubnaha sare ee Golihii Maxaakiimta Islaamiga uu filayo in uu miro dhal noqon doono, inkastoo uusan faahfaahin intaa dhaafsan ka bixin waxyaabihii ay isla soo qaadeen iyo haddii ay Golaha Maxaakiimtu ka aqbaleen arrimaha uu soo bandhigay Andre. Ergayga Midowga Yurub ayaa sheegay in C/llaahi Yuusuf iyo Cali Mahdi soo dhaweeyeen dhankooda inay qaybweyn ka qaataan sidii shirka dib u heshisiinta ee Muqdisho ka furmay la isugu keeni lahaa dhamaan dhinacyada Soomaaliyeed ee doonaya in dalka Soomaaliya nabad iyo kala dambeyn lagu soo dabaalo. Warbixinta ergayga Midowga Yurub ee arrimaha Soomaaliya ayaa soo baxday xili ay Golaha Maxaakiimta madaxdooda sarsare sheegeen inay aysan ka qaybgali doonin shirka Muqdisho ka furmay, iyagoo shuruud ka dhigay in marka hore dalka laga saaro ciidamada Itoobiya.
Ra�isul Wasaaraha dalka Soomaaliyeed Cali Max�ed Geedi ayaa eedeeyn u jeediyey Doladda Mareykanka iyo waliba Midowga Yurub, waxa uuna sheegay in Ra�isul Wasaaruhu in Mareykanka iyo Midowga ka gaabiyeen in ay taageeraan shirka dib u heshisiinta qaran ee ka furmay Muqdisho.
Geedi ayaa tilmaamay in Mareykanka iyo Midowga Yurub ay horey u ballanqaadeen inay bixinayaan qarashaadka ku baxayta shirka dib u heshiisiinta, balse ballanqaadkoodii aysan waxba ka fulin, taas oo uu Geedi ku tilmaamay mid laga xumaado oo sharaf dhac ku ah Mareykanka iyo Midowga Yurub.
Warbixintaan oo uu qoray Wargeyska Sharqul Awsat ayaa sidoo kale Geedi waxa uu ku sheegay in ergadii Imaan lahayd shirka qaarkood weli soo gaarin, sababao la xiriira dhanka qarashaadkii ay ku soo bixi lahaayeen, waxa uuna Geedi carabka ku dhiftay in haatan 900 oo ergo joogto shirka.
C/raxmaan Maxamuud Shifti oo ah afhayeenka Shirka dib u heshiisiinta qaran ee axaddii ka furmay Muqdisho maanta dib loo furayo markale ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay hadalo dhawaan soo baxay oo sheegayey in guddiga shirka uu iibsaday waraaqaha ergada ka soo qaybgaleysa shirka.
C/raxmaan Shifti ayaa war aan sal iyo raad toona laheyn ku tilmaamay hadalkaasi, isagoo sheegay in gudiga waraaqaha caasuumaadda ee ergada shirka ka qaybgaleysa u geeyeen beelaha Soomaaliyeed, ayna hawshaasi u fuliyeen sidii loogu talagalay.
C/raxmaan shifti ayaa sidool kale wax kama jiraan ku tilmaamay in Guddiga Shirka dib u heshiisiinta uu lug ku leeyahay xulitaanka ergada beelaha Soomaaliyeed uga qaybgaleysa shirka, balse waxa uu sheegay Shifti in iyagu la socodsiin leeyihiin oo keliya, laakiin xulushada wufuuda ay shaqo ku leeyihiin Beesha markaasi waraaqaha casuumaadda loo geeyo. Hadalka Shift ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xili ay weli isa soo tarayaan cabashooyin ka imaanaya qaar ka mid ah Beelaha Soomaaliyeed oo iyagu ku eedeeyey Guddiga shirka in ay wax isdaba mariyeen oo ay kala sooceen beelo Soomaaliyeed, isla markaana ay shanta la galeen wax aysan shaqo ku laheyn.
Saddexda Mas�uul ee ugu sareysa Dowladda Federaalkaoo kala ah Madaxweyne C/llaahi Yuusuf, Ra�isul Wasaare Cali Max�ed Geedi iyo Guddoomiyaha Baarlaaanka Sheekh Aadan Madoobe ayaa kulan kuwa yeeshay xarunta madaxtoonyada ee Villa Somalia.
Kulanka ay saddexda mas�uul yeesheen oo ahaa mid ay albaabadu u xirnaayeen isla markaana aan saxaafadda loo ogolaan looga wada hadlay qodobo dhowr ah sida ay sheegeen xubno ku dhow dhow saddexda mas�uul waxana qodobada ka mid ahaa Shirka dib u heshisiinta qaran oo maanta lagu wado in uu dib uga furamaya Muqdisho, amaanka dalka, gaar ahaan caasimadda Muqdisho iyo waliba sidii mushaaraad loo siin lahaa xildibaanada Baarlamaanka.
Ra�isul Wasaare Geedi oo isagu doraad dalka dib ugu soo laabtay ayaa la sheegay in uu soo jeediyey in ammaanka Muqdisho la adkeeyo, isla markaana ciidamo dheeraad ah lagu daadiyo gebi ahaanba caasimadda Muqdisho, waxa uuna Ra�isul Wasaaruhu tilmaamay in ammaanka oo la adkeeyo ay keeni karto in shirku uu guuleysto. Guddoomiyaha Baarla-maanka Sheekh Aadan Madoobe ayaa lagu waramayaa in isna uu Madaxweynaha iyo Ra�isul Wasaaraha hor dhigay arrinta mushaaraadka golaha Baarla-maanka oo aan mudo dheer wax mushaar ah la siinin, waxayan wararku sheegayaan in saddex mas�uul ay isku afgarteen in Xidhibaanada sida ugu dhaqsiyaha badan mushaaraadkooda loo siiyo, waxayna ugu dambeyn saddex mas�uul la sheegay inay isku afgarteen in si culus loo adkeeyo amaanka caasimadda, si uusan shirka fashil ugu imaan.
Suuqa weyn ee Bakaaraha ee caasimadda Muqdisho ayaa maalintii 15-aad uusan wax dhaq-dhaqaaq ganacsi ah ka socon, iyadoo ay suuqa ku sugan yihiin ciidamada Dowladda Federaalka oo halkaasi ka wada hawlgalo ay sheegeen in ay amniga suuqa ku adkeynayaan.
Maalintii shalay ahayd ayaa waxaa suuqa ka dhacday tacshiirado ay rideen ciidamada Dowladda kadib markii Babooyin lala beegsaday goobo ay ku sugnaayeen, waxaana tacshiirad-daasi wax ku noqday dad rayid ah, iyadoo labo ka tirsan askartana ay ku dhinteen Bambooyinkii dhacay, waxaana markaa kadib ciidamo amar ku bixiyaan in gebi ahaanaba suuqa la xiro, waxayna ganacsatada meherada yar yar ku leh suuqa albaabada u laabeen goobahoodii ganacsi, waxayna ganacsatadu cabashooyin ka muujiyeen arinta cakiran ee ka taagan suuqa, iyagoo Dowladda Federaalka u soo jeediyey inay ka dulqaado ciidamada si ay dib ugu furtaan meheradahooda oo ay sheegeen in aysan mudo furin.
Waxaa ciidamo tiro badan oo dheeraad ah la soo dhoobay deegaanada C/casiis, Shibis iyo Shagaani, waxaana ciidamadaani lagu sheegay in sugayaan ammaanka goobta uu shirku ka dhacayo iyo waliba agagaarkeeda.
Keenistaan ciidamadan fara badan ayaa la sheegay inay ka dambeysay kadib markii shalay kulan isugu yimaadeen saddexda mas�uul ee ugu sareysa Dolwadda Federaalka, kuwaas oo la sheegay in kulankooda uu ka soo baxay amarkaan ciidamada dheeraadka ah lagu soo dhoobay deegaanadaasi.
Waxa uuna Ra�isul wasaare Cali Max�ed Geedi soo jeediyey in guud ahaan ammaanka Magaalada Muqdisho la adkeeyo si amniga loo xaqiijiyo isla markaana looga digtoonaado in uu shirku fashil ku yimaado.
Dadka deegaankaasi degan ayaa dhanka kale cabasho ka muujinaya ciidamada deegaankasi la keenay, iyagoo sheegay in guryaha aysan ka soo bixin kari, isla markaana aysan suuqyada ka soo adeegan Karin.
Shirka dib u heshiisiinta oo axaddii la furay ayaa maanta mar kale lagu ballansan yahay in dib loo furo, iyadoo ergadii shirka ka qaybgali lahayd Magaalada Muqdisho soo gaarayaan, inkastoo qaar kalana aysan weli soo gaarin, wallow ay jiraan beelaha qaar oo ka biyo diidasan shirka dib u heshiisiinta iyagoo tilmaamay inay jiraan wax is dabamarin ay ku eedeeyeen in uu galay guddiga shirka dib u heshiisiinta qaran ee Beelaha Soomaaliyeed.
Magaalada Nairobi ee caasimada kenya ayaa laga soo bilaabo maalintii Axada ahayd abaarihii 02:30 ilaa maalintii shalay ahayd ee Talaada ahayd ayaa siyaabo kala duwan looga dareemayay dhul gariir luxay dhismayaasha xaafada islii iyo waliba qayb ka mid ah magaalada dhexe ee Nairobi.
Guryaha dhaar dheer ee xaafada islii ayaa inta badan dadkii daganaa dhulka ay wada yimimaadeen ka dib markii ay cabsi xoogan dareemeen oo ku aadan in dhismyaashu bur buraan.
Haayada US Geologica Survey ayaa waxay sheegtay in dhul gariir xoogan oo ka dhacay bariga Africa waxaana si xoogan looga dareemay wadanka Tanzania 6.1 Richter qalabka lagu cabiro dhul gariirka.
Dabayaaqadii Sanadkii hore December 2005 ayaa waxaa ay ahayd markii ugu danbsay ee dhul gariir lagu qiysaasay 6.8 Richter uu ka dhacay magaalada Nairobi balse aysan cidna waxba ku noqon.
Jaamacadda Nairobi,waaxada u qaabilsan Geologica ayaa war ay xalay soo saartay waxay ku sheegtay in dhul gariirka laga dareemayo magaalada Nairobi uusan ahayn mid wax yaalo wayn gaysanayn.
Maxaa laga yiri Masaajiyadda Nairobi
Maasjiyada Magaalada Nairobi gaar ahaana kuwa xaafada islii ayaa culumada soomaalida ee mashaa'ikhada ka ah waxay dadka ku wacdiyeen in dhibka danbiyada ay gaystaan dadku ay ka danbayso musiibooyinka [ Waxa dhib idin ku dhaca oo dhibaato ah waa waxa ay gacmihiina sameeyaan eebe wax badana waa cafiyaa] .
Masaajidka 3 street ee xaafada islii ayaa xalay saq dhexe waxaa ay culumada masaajidkaasii dadka ku wacdiyeen in eebe mar walba la xasuusto oo aanan la ilaawin towxiidkana ay dadku afka ku hayaan iyadoo ay masaajidka dad aad u badan ay ka buuxeen oo ka soo hayaamay guryahadooda cabsi ay ka qabeen dhul gariir cusub.
Sidoo kale Masaajidka 6 steert ee Abuu Bakar Sadiiq waxaa ay culumada masaajidkaasi salaadii subax dadka ku dhiiri galiyeen u laabashada eebe mar kasta waxaana ay sheegeen culumada masaajidkaasi in dhibka iyo qaxarka ka taagan dunida ay sabab u tahay wax kasta oo ciqaab ah.